cool_tech - mobile blast - BBC ပင်မစာမျက်နှာ
cool_tech - mobile blast
ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းက သတင်းတွေကို မိုဘိုင်း ဖုန်းကနေ ဝန်ဆောင် ပေးနေပြီ ဖြစ်တာမို့၊ အရှိန် အဟုန်နဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲ လာနေတဲ့ မိုဘိုင်း လက်ကိုင်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အကြောင်း ဒီတပတ် ကူးတက် နည်းပညာ ကမ္ဘာ ထဲမှာ ကိုသက်ထွေးနိုင်က တက်ဆက် ပေးထား ပါတယ်။
လူ ၃ ဦး မျိုးဗီဇနဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကလေးဖွားမြင်
အစ္စရေးသမ္မတဟောင်း ရှီမွန်ပဲရက်စ် ကွယ်လွန်
နာရီထဲထည့်တဲ့ ဘက်ထရီတွေရဲ့ အန္တရာယ်
အသက်ရာကျော် ကိုးရီးယား တိုင်းရင်းဆေးဆရာ
အမေရိကန် သမ္မတလောင်းတွေ စကားစစ်ထိုး အမေရိကန် သမ္မတလောင်းတွေ စကားစစ်ထိုး ဗီဒီယို
အလက်ပိုမှာ အကူအညီတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်
ဘီဘီစီ လမ်းညွှန် News News Sport Weather Radio Arts သုံးစွဲမှု စည်းကမ်းချက်များ ဘီဘီစီအကြောင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် မူဝါဒ ကွတ်ကီးစ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီ? မိဘ အုပ်ထိန်းမှု လမ်းညွှန် ဘီဘီစီကို ဆက်သွယ်ရန် ဒီဆိုဒ်မှာ ကြော်ငြာထည့်မယ် ကြော်ငြာ ရွေးချယ်မယ် Copyright © 2016 ဘီဘီစီ. ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ အကြောင်းအရာများကို ဘီဘီစီမှ တာဝန်မယူပါ။ ပြင်ပ လင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ ချဉ်းကပ်မှု/ လင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ